Izwe laseMelika lihlala Esivumelwaneni saseParis okwamanje | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izwe laseMelika lisahlala Esivumelwaneni saseParis okwamanje
Kusukela imiphumela yokhetho lukamongameli wase-United States, owanqoba uDonald Trump, kube nezinkinga ezahlukahlukene kanye nezimpikiswano ngokuthi ngabe Izwe laseMelika lizoshiya noma lizohlala Esivumelwaneni saseParis.
Ukuze kuncishiswe imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu nokwenza ngcono ukuzinza komhlaba, Kuyadingeka ukuthi amazwe akhiqiza ukukhishwa okuningi emkhathini, njenge-US ne-China, baqinisekisa isivumelwano se-Paris. Kwenzekani ekugcineni e-United States?
1 UDonald Trump ekhanda le-USA
2 Ingqungquthela yolwazi ngezenzo zikaTrump
3 Umbono waseMelika noTillerson onethemba
UDonald Trump ekhanda le-USA
UDonald Trump ukhethwe njengoMongameli waseMelika futhi uyindoda ekhetheke kakhulu. Cabanga ngalolo shintsho lwesimo sezulu Kungukuqanjwa kwamaShayina ukuze athole ukuncintisana. Kususelwa ekwenzeni isitatimende esinjalo kokuhlangenwe nakho kwabo kanye nokuhlangenwe nakho kwabo. Uthi eCanada kuyakhithika futhi kubanda kakhulu futhi, uqobo, akayiboni imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu.
Ebhekene nezitatimende ezinjalo, umemezele ngesikhathi sakhe sobandlululo ukuthi, ukube ubengumongameli wase-United States, uzokhipha zonke izimali ezenzelwe izenzo zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu. Lokhu kuyakwenza kusukela ku- alukho ushintsho olunjalo futhi izokwaba leso sabelomali ekutholeni nasekuthuthukiseni ukusebenza kahle kukagesi wezinsalela.
Ingqungquthela yolwazi ngezenzo zikaTrump
Ingqungquthela yokuqala yokwazisa kaMongameli uDonald Trump kugujwa ngoJanuwari 11. Ingqungquthela i-Said ayinikezi lutho olumnandi ngenqubomgomo ezolusebenzisa oluphathelene nezinkinga zemvelo ezizokwenziwa yiWhite House kusukela ngoJanuwari 20. Yilolo suku lapho uDonald Trump ethatha isikhundla sokuba ngumongameli.
Into ekhuthazayo kumgomo wezulu ukuthi Rex Tillerson, owayenguMongameli we-ExxonMobil noNobhala Wezwe wesikhathi esizayo wase-United States, uqhubekele phambili ngokuthi okwamanje, i-United States ngeke isilahle Isivumelwano SaseParis mayelana nokuguquka kwesimo sezulu. Iphinde yasithatha njengesibalulekile isinqumo i-United States kumele aqhubeke nokubamba iqhaza ezingeni lamazwe omhlaba kuzo zonke izivumelwano nezinqumo ezenziwe mayelana nokuguquka kwesimo sezulu, njengoba i-United States ingumbuso womhlaba obhekele cishe uhhafu wokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa emkhathini.
“Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi i-United States iqhubeke nokuzibandakanya. Ukubhekana nezinsongo zokuguquka kwesimo sezulu idinga impendulo yomhlaba wonke. Alikho izwe elingaxazulula leyo nkinga lodwa, ”kusho uTillerson.
Ubuye wengeza ukuthi iqiniso lokuthi i-United States yahlala Esivumelwaneni saseParis, esasigunyazwe phambilini ngabaphathi bakaBarack Obama, kwaba kuhle kakhulu ekugcinweni komhlaba ngendlela efanele.
Umbono waseMelika noTillerson onethemba
I-ExxonMobil yayiholwa nguTillerson ngenkathi iSivumelwano SaseParis siqala ukusebenza ngoNovemba odlule kanti ngaleso sikhathi wayesezilinganisele esitatimendeni ukuthi iSivumelwano SaseParis sasiyisinyathelo esibaluleke kakhulu sohulumeni emhlabeni wonke ukuthi bakwazi ukusiphendula ngaphambi kokubucayi imiphumela edalwe ukuguquka kwesimo sezulu emhlabeni wonke.
Uma kubhekwa ukuthambekela kokwenqaba kukamongameli okhethiwe kanye namanye amalungu eqembu lakhe likahulumeni, ukulindela ukwenza okuhle kwesimo sezulu kanye nesimo semvelo kuyinto enhle kakhulu. Kodwa-ke, isimangalo sikaTillerson Kusishiya sinolwelwesi lwesiliva kulesi simo.
Kuyakhuthaza impela ukuthi uTillerson uyabona ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kudinga isenzo somhlaba wonke kohulumeni abaningi ababhekele ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya emkhathini. Ngaphezu kwalokho, kusinika nethemba lokuthi angasebenza ngokweluleka uDonald Trump ngesidingo sokuqhubeka Esivumelwaneni saseParis, ngoba iMelika kufanele ube ngumholi olwa nokuguquka kwesimo sezulu futhi uhloniphe ukuzibophezela kwakho emhlabeni jikelele, ngoba ibhekele cishe uhhafu wokukhishwa komhlaba. UDonald Trump akumele agcine i-United States esivumelwaneni saseParis kuphela, kepha kumele akwenze njengenhloko yezokuxhumana zaseMelika.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izwe laseMelika lisahlala Esivumelwaneni saseParis okwamanje
Imephu ikhombisa umoya ongcolile esiwuphefumulayo
Amazinga okushisa azokwehla eSpain kusukela kusasa